Linux Mint သည်ဝင်ငွေများကို Banshee နှင့်ခွဲဝေပေးခဲ့သည် Linux မှ
Linux Mint သည်၎င်း၏ဝင်ငွေကို Banshee နှင့်ခွဲဝေလိုက်သည်
အမှုအရာပုံရသည်၎င်းတို့၏သင်တန်းကိုယူပြီးနေကြသည်။ အပြောင်းအလဲအပေါ်အငြင်းပွားဖွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံပြီးနောက် Linux Mint အတွက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် Banshees မင်းရဲ့ plugin နဲ့ဝင်ငွေ ၁၀၀% ရဖို့ အမေဇုံ, ပြင်သစ်ဖြန့်ဖြူး၏ developer များအမြတ်အစွန်းဖြန့်ဝေဖို့အရာအားလုံးပြောင်းပြန်ပါပြီ 50-50.
ယခု Linux Mint ကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည် 50% အားလုံးဝင်ငွေရရှိမှု၏ Bansheesကောင်းစွာအတွက်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ် ဒီဝဘ်.
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှစ၍ Banshee တွင်ရှိခဲ့သည် အမေဇုံ MP3 Store ကိုပေါင်းစည်းခြင်း။ အမေဇုံသည် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်တွဲဖက်ကြေးပေးသည် (MP10 များ၏ ၁၀%၊ အခြားပစ္စည်းများအတွက်လျော့နည်းသည်)၊ အားလုံးအကျိုးအမြတ်မယူသော GNOME ဖောင်ဒေးရှင်းUbuntu တွင် ၇၅% ဖြတ်တောက်သော Ubuntu မှလွဲလျှင် သူတို့က 50% ကိုစောင့်ရှောက်ရှိရာ Linux က Mint ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Linux Mint သည်၎င်း၏ဝင်ငွေကို Banshee နှင့်ခွဲဝေလိုက်သည်
Mint လုပ်ခဲ့တာဟာတရားမျှတမှုရှိကောင်းရှိချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကော်ပိုရိတ်ပုံရိပ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ရမည်။
သင် Windows ၏အရသာကိုရရှိခဲ့သလား။ ဟားဟား .. ဟားဟား
ရဲစွမ်းသတ္တိက Ubuntu ကိုဝေဖန်သော်လည်းသူသည် Unnamed ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါ hux သည် linux ဖြစ်သော Ubuntu ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အဲ့ဒီကိစ္စမှာငါ Windows ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့် ubuntoos ဒါမှမဟုတ် Tito Mark fucking တွေမရှိဘူး
တစ်ခါတလေမှာငါကအဲဒါကိုငါ့အပေါ်မှာမမူတည်ဘူး၊ ငါကငါ့အလုပ်မှာသုံးသလို "အမည်မသိ" တာဝန်ကျေပွန်မှုမရှိဘူး။ ကျွန်တော်နားမလည်တာက Courage ရဲ့ Mark နဲ့ Ubuntu ကိုစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​သူတို့ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်ငါတောင်မှသူတို့ကိုနာမည်တောင်မပြောဘူး။ ဟားဟား
ရဲရင့်ခြင်းရဲ့ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာပါပဲ။ Justin Bieber ကိုနားထောင်နေစဉ် ဦး လေးမာ့ခ်သည် pacifier ကိုခိုးယူသွားသည်ဟုသူထင်ခဲ့သည်။
အင်တာဗျူးကြောင့် Justin Bieber ပန်ကာမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းသူသည် OS ကိုအသုံးချသည်အထိ Garbage အားပိတ်ပင်ရန်ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်။
ငါက Windows ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူက fix ကိုနိုင်လျှင်ကြည့်ရှုရန်ကြည့်ရှုရန်ကွန်ပျူတာများကိုတ ဦး တည်းစေလွှတ်ပြီးပါပြီ
ငါသူတို့ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန် ၅၀% ဟာအသားတင် ၀ င်ငွေမှာပိုမိုမြင့်မားလာမယ်၊ တရား ၀ င်မှုအကြောင်းမဟုတ်ဘဲ LM ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားအရည်အသွေးအကြောင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတဲ့ ၁၀၀% ထက်ပိုပြီးအသားတင်ဝင်ငွေတိုးလာမယ်ဆိုရင်ငါမအံ့သြဘူး။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီး LM ၏ပုံသဏ္dirာန်ကိုညစ်ပတ်အောင်တားဆီးရန်အတွက်မဟာဗျူဟာကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းတို့သည်စမတ်ကျသည်ဟုထင်သည် (Machiavellian: ဟုတ်ကဲ့) သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ဝေဖန်မှုတွင်အဓိပ္ပာယ်နှင့်အကြောင်းပြချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့၏မူလဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောနိဂုံးသို့ရောက်သွားလျှင်၊ ထို့နောက်သူတို့ကစမတ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်းငါ့အမြင်ကနေလေးစားဖွယ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် LM ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပုံနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတယ်လို့ငါထင်တဲ့အတွက်ဒါဟာမဟာဗျူဟာမြောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ထက်ပိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။
Gimp 2.7.4 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Stallman: Facebook ဟာကြီးမားတဲ့သူလျှိုပလက်ဖောင်းတစ်ခု